Hoax » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၆၁ ) ( မိုးစက်ဝိုင် )	25
အဘ ရဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၆၀ ) ( အခွန် ဋ္ဌာန ) Post လေးထဲမှာ တောင် ထဲ့ရေးခဲ့မိသေးတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်လေး အကြောင်း က ၊
” ဒီလို ဖော်ပြရာမှာ အမေရိကန်မှာ ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ မိုးစက်ဝိုင် ခေါ် Yang Xinrong ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က Miss Chinese International 2009 ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို 2009 Golden Phoenix Cup ရဲ့ Miss China contest runner-up ဆုရှင်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြကြပါတယ် “
သူတို့ ရဲ့ ဦးနှောက်တွေက သုံးလို့ရလောက်အောင်လဲ မဖွံ့ဖြိုး ။ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် နိုင်ငံတကာ အတွေးအမြင်ကလည်း ဖွတ်ကြား ဆိုတော့ကာ ။
Google Translator က ရှေ့နောက် စာလုံးတွေလဲ လွဲတယ် ၊ Grammar လဲ လွဲတယ် ။ စာလုံး အဓိပ္ပါယ် ပြန်တာတွေလဲ လွဲတတ်တယ် ။
မိုးစက်ဝိုင်လေး ပြိုင်ဖူးတာက ၊ ရန်ကုန်မှာ ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှာဘဲထုတ်တဲ့ Gold Phoenix တရုတ် သတင်းစာက organize လုပ်ပေးတဲ့ ၊ Miss Chinese Burma 2009 ( ဗမာပြည်ပေါက် တရုတ်နွယ်ဖွား အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ ၂၀၀၉ ) ။
Padonmar says: ” လူမျိုးရေး ရှေ့တန်းတင်ပြီး အရည်အချင်းရှိ လူတော်တွေကို ပစ်ပယ်ခဲ့တာ ၊
ဒီလို ပြောကြကြေးဆို ဦးဂိုအင်ကာရဲ့၊ အဖိုး အဖွား အဖေ အမေ တွေလည်း အိန္ဒိယက ဟိန္ဒူ ကုလား တွေလေ။
မြန်မာပြည်ကို ( ဘယ်လောက် ) ချစ်လဲဆို ၊ ( သေတော့ ) သူ့ ( ရဲ့ အရိုး ) ပြာကိုတောင် ဒီ ( မြန်မာပြည် ) မှာ ( ပြန်လာပြီး ) ရေမျှောပေးခိုင်းတယ်။
Foreign Resident says: အခုမှ ပုံကို သေချာကြည့်မိတယ် ။
ဖွတ်ပြောင် says: အော် ခေး ရယ်
black chaw says: မသွားအပ် မလာအပ်တဲ့ အရပ်တွေကို သင်ပြမပေးထားမိဘူးဗျာ…။
TNA says: မပေါင်းအပ်တဲ့သူတွေနဲ့သွားပေါင်းမိသကိုးအဘရေ။ လူပေါင်းမှားတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပြောတာဖြစ်မယ်။ နောင် သင်ခန်းစာယူနိုင်ကြပါစေ။
kai says: အမေရိကားကတော့.. ဒီမှာမွေးရင်.. ဖြစ်ချင်သည်ဖြစ်စေ..မဖြစ်ချင်သည်ဖြစ်စေ.. အမေရိကန်အော်တိုမစ်တစ်ဖြစ်တာပဲ..။ မွေးတာနဲ့.. အစိုးရဆီက .ထောက်ပံ့တာတွေ…တန်းစီဝင်လာတယ်..။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဂွတော့အကျသား
Foreign Resident says: မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says:
TNA says: အဲကပ္ပတိန် သိဒယ်။ ဟီဟိ
Foreign Resident says: TNA says:
TNA says: အောင်မယ်လေး အဘရယ် မတိဒဲ့ဒူတွေ တကယ်ထင်ပါအုံးမယ်။ အဘအကြောင်းများ မပြောချင်ဘူးနော်။ ဟိုအင်းယားလမ်းက ကပ္ပတိန်တောင်အဘကိုမမှီပါဘူး။ ၁၆ တွေတောင် အဘကိုသိသကော။ အိုက်လောက်ပါဆို။ :-D
Was this answer helpful?LikeDislike 1566
Mလုလင် says: ဖြစ်ပုံက . . သန်း ၆၀ ထဲကမှ အင်တာနက် သုံးနေတဲ့ active person က ၁၂ သိန်းလောက် ထဲမှာ ပွ တဲ့သတင်းပါ။ ဂျာနယ် တွေမှာ ပါလာမှ ၀က်ဝက်ကွဲ တော့တာပါ။ ကောလဟာက ထွက်တဲ့အခါ ရယ် ဘာသာစကား ဘာသာပြန်ရယ်ကြောင့် . . နိုင်ငံတကာ သွားမယ့် မြန်မာ့ မယ် ဟာ . .တရုတ်က မယ် ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် . .မြန်မာက မယ် တွေ အရည်အချင်း မရှိလို့ တရုတ် က မယ် ကို ငှားရတယ် လို့ နိုင်ငံတကာ ကထင်ကုန်ကြမှာ စိုးလို့ ကန့်ကွက် ကြတာပါလို့ သိထားပါတယ်။ အဘ ပြောသလို ဆိုတာ သိကြရင်တော့ အဲ့လောက် ကန့်ကွက် ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ ၁၀ ရက်နေ့ တောင် အဲ့ဒီ့ ကိစ္စ ဆန္ဒပြကြမယ် သတင်းသဲ့သဲ့ ကြားပါတယ်။ သဘောက တော့ ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံ ပြန်လာတတ်တဲ့ သဘာဝ ပါ။ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အများစု (ခန့်မှန်း) က ဆိုပါတော့ ကုလား ကို မုန်းတယ် ဆိုရင် . . ဘာလို့ မုန်းကြသလဲ . . အကြောင်းပြချက် . . ရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီလို ပဲ . . တရုတ် နဲ့ကလဲ . . အကြောင်းပြချက် တွေ ရှိကြမှာပါ။ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံ၊ အလုပ် ကိုး ဗျ . . . . . ။ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ အနာဂတ်လဲ . . အခု လက်ရှိလုပ် နေတဲ့ ကံ၊ အလုပ် အရ . . ပဲ့တင်သံ ခံရမှာပါ။ ဆိုတော့ . . . ကျွန်တော့ အယူကတော့ – – – အလှည့်ကျ . မနွဲ့ စတမ်း . . ပဲ . .။ မှတ်ချက်။ ။အဘ ရဲ့ ပိုစ့် ကိုတောင် တစ်ချို့  facebook status တွေမှာ ရှဲကြ ကူးကြ ဖြစ်နေပါပြီ။ (အဲ့လို ပေါက်တာ)
Foreign Resident says: M လုလင် says:
sorrow weaver says: ဘဖော ..အဲ့တာဂုဏ်ယူစရာပါဗျ ။ ဘဖောရဲ့ စေတနာစကားတွေက တချို့ခါးမှာပဲဗျ ။ ကျွန်တော်တော့ ဘဖောအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ။
TNA says: အာဟိ ရခိုင်ပိုစ့်တုန်းက အရှဲကောင်းလိုက်တာ ပတ်တနာဒွေတက်တွားလို့ နောက်မှ ပြန်ရှင်း ယူရတယ်။ အဘဖောက အဘအဘနဲ့ရေးတာကို ( အိုက်ဒုန်းကလဲ သမဒဂျီးကို အဘအဘခေါ်နေ ကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ) သမဒပုံစံနဲ့ပြောတယ်ထင်ပြီးဆဲခံရလို့ နောက်မှမနဲရှင်းရတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 506
ရာမည says:ိ
ရိုက်ပေါက်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး .. ကျုပ်တို့ ဗမာ လူမျိုးရဲ့ အရင်းခံဟာ ဘာလဲ .. တရုတ်နဲ့ ကုလားဟာ ကြေးကြီးကြလို့ .. သူတို့ အချင်းချင်း ယူကြတယ်။ ယူနန်ဆို ယူနန် .. ကွမ်းတုံ နဲ့ ဖူးကျင့်နဲ့ မရောဘူး။ အခုတော့ မသိဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက် .. မြန်မာပြည်ရဲ့ Migration ရာဇဝင်နဲ့ စစ်ဖြစ်တာတွေကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရင် .. ဒါတွေ သိရမယ်။ တောင်ပေါ် တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ်ထားလိုက်ပါ။ ဒေသခံ အရိုးခံ လူတွေကို ဗမာလူမျိုးဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ရင် .. မြေပြန့် ဟိုး အညာကနေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အထိ .. ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ရာဆိုပြီး ထားလိုက် .. ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ တွေ့ရမလဲဆို .. မြန်မာပြည်မှာ အနော်ရထာခေတ်က Migrant တွေဝင်လာတယ်။ ရာဇကုမာရ်ဆိုတာ ကုလားလူမျိုး .. Raj Kumar (or) Raaj Kumar (ရှပ်ကူးမာရ်း) ပဲ။ အနော်ရထာ အနန္ဒာ .. အဲဒါတွေဟာ အန္ဒိယနွယ်ဖွား .. ဟိုးခေတ် အန္ဒိယကို မွတ်စလင် အင်ပါယာချဲ့တော့ .. အန္ဒိယမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ ပြုန်းတီးတော့မှာပါပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ .. ဒေသခံတွေ Migrant လုပ်လာကြတယ်။ အဲဒီတော့ မူရင်း ဗမာ ဒေသခံတွေနဲ့ ချစ်တင်းနှောမှာပဲ။
ဒါတောင် ဟို မွတ်စလင် ညီအစ်ကို ဗျတ်ဝိ ဗျတ်တ နဲ့ သူ့သား နှစ်ယောက် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းမှာ သောင်းကျန်းသွားတာ မပါသေးဘူး။ အဲဒါကို ချစ်ကြလွန်းလို့ ယနေ့ထက်ထိအောင် ပွဲဆက်ကြတယ်လေ ဗျာ။ ဘယ်ခေတ်က ဘယ်လူမျိုးတွေ Migrant လုပ်လားသလဲ ဆိုတာထက် .. ဥပမာ သူ့ Origin လူမျိုးတွေ အစုစု နေထိုင်တဲ့ နေရာ ဥပမာ ဇေယျဝတီ ဆို .. ကုလားပြည်ရောက်သွားသလား အောင်းမေ့ရတယ်။ ကုလားပြည်က ရွာလေးတွေထဲ လုံးလုံးရောက်သွားသလား ထင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ နဲ့ မိုင်အနည်းငယ် ဝန်းကျင်မှာတော့ မူရင်း ဒေသခံ နဲ့ ထို Migrant လုပ်လာတဲ့ လူမျိုးတွေ စပ်ပြီး မွေးလာကြတဲ့ သူတွေ တစ်ပုံကြီး။ ကသည်း၊ ရှမ်းမျိုးစုံ၊ မွန် ကုန်သည်တွေ ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လုပ်ကြတယ်။ နောက် ထိုင်းနဲ့ စစ်ဖြစ်လို့ ထိုင်း ၁ သိန်းကျော် သူတို့ ဘုရင်ပါတော်မူရာ မြန်မာပြည်ကို လိုက်လာကြတယ်။ အဲဒီ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်က မြန်မာပြည်လူဦးရေး စုစုပေါင်းဟာ ၁ သန်း မပြည့်ဘူး။ အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဟာ လူဦးရေ ၂ သိန်းလောက်ပဲ ရှိမယ်။ အဲဒီ ၂ သိန်း နဲ့ အင်းဝ နဲ့ အမရပူရရောက် ထိုင်း ၁ သိန်းပေါင်းရင် (သမိုင်းမှာတော့ ၁ သိန်းနီးပါးဆိုပြီးရေးထားတယ်) .. အစပ်တွေထွက်လာမယ်။ အဲဒါတွေက ထိုးမုန့်တန်း၊ ရွှေချည်ထိုး၊ ရွှေဆိုင်း၊ ပန်းပု၊ ပန်းချီ၊ ဇာတ်သဘင် နဲ့ မှန်စီရွှေချတွေကို အမွေဆက်ခံသတဲ့။
သူတို့နဲ့ ကုလားစစ်တပ်လိုက်လာတယ်။ ဂေါ်ရခါး ဂေါ်ရချို မှ ချစ်တီး ပန်ချာပီ .. စုံစုံပဲ .. ပြောရမှာ .. စိတ်လေးလာပြီ။ နောက် .. Tokyo Hot တို့ ထုတ်လုပ်ရာ .. မိန်းမမြင်ရင်ပြီးရော .. ကြီးကြီးငယ်ငယ် ဆိုပြီး ငတ်ပြတ်နေတဲ့ .. ဂျပန်တွေ ဝင်လာတယ်။ အိုကွယ် .. စစ်ပြေးတဲ့ .. မြန်မာမတွေ ရုပ်ဆိုးအောင် အနံ့တွေ နံ့ထောင်းအောင် ရွံတွေလိမ်းလို့ ရေမချိုးပဲ နေရတယ်ဆိုပဲ။ အလှများပြင်မိလို့ကတော့ .. ဟင်း ဟင်း
ရာမည says: စ​တေးတပ်​ ကို ကူးတင်​​ပေးတာပါခင်​ဗျာ
ကထူးဆန်း says: ခွိ ခွိ …ဘာဘဲ ပြောပြော ဦးကြီးမိုက်တစ်ယောက် ကြိမ်စကြာရိုက်ချိန်မှာဘဲ မိုးစက် လေးကြောင့် ရွာလည်း နဲနဲ ပြန်စည်လာသလိုဘဲ ..
ဖွတ်ပြောင် says: အိုက် နာမယ် မကျောဘာနဲ့ဗျာ
Ma Ma says: ကိုယ်အပါအ၀င် ဒီကလူတွေရဲ့ အားနည်းချက်က သတင်းတစ်ခုခုကြားလိုက်ပြီဆိုရင်………
မှန်မမှန်စိစစ်ဖို့ထက် အဲဒီအပေါ်ကို ဝေဖန်ဖို့ပဲ အားသန်ကြတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 579
တိမ်မည်း says: ပထမ ပြောချင်တာကတော့ ဘဖောကို ရှဲရှဲဂျာ…..
ဦးကြောင်ကြီး says: နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း တကျော့ပြန် ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာရွာထဲ ပြန်ဝင်ဆန့်တဲ့ပွဲမို့ မြန်မာသွေး စစ်စစ် သို့မဟုတ် အများစု သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ တဝက်ပါစေချင်တာ အမှန်ပဲ..။ မိုးစက်ဝိုင် မြန်မာသွေး ဘယ်လောက် ပါသလဲ အမှန် သိချင်တယ်။ နောက်ပွဲတွေတော့ သိပ်အရေး မကြီးဘူး…. ကာစင်ဘိုင်သမီး ဘာနူးဖြစ်ဖြစ် ဦးအင်ဟုတ်သာမီး အီတွန့်ဗွမ်ဖြစ်ဖြစ် မိုက်ကယ်အောင်ပုညီမ ရှင်ဂွမ်းဂွိဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်ရင် ပီသရင် အရည်အချင်းပြည့်မှီရင် အိုကေ…။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် သွားပြိုင်လည်း နိုင်မည်မဟုတ်… ဆန်ကာတင်စာရင်းပေါက်ရင် ကံကောင်းဆိုဒေါ့ သိပ်ပြူးပြူပြဲပြဲ မဖြစ်တာကောင်းတယ်… ဒါပေသိ အဦးဆုံး ပွဲတွေမှာတော့ မြန်မာလူမျုိုးသည် ဒါမျိုးလို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လေး ပြချင်ဒယ်….။ မိုးစက်ဝိုင်က အိုင်ကျူ အီးကျူ ရုပ်ရူပကာ ပြိုင်ဖက်ကင်းနေရင်တော့ မလွှဲမရှောင်သာ ရွေးရပါမယ်… နို့မို့ရင်ဒေ့ါ အပြောဓာတ်ဗူး…
ဦးဦးပါလေရာ says: အဲဒီတော့-
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11
joe wynn says: တိုင်းပြည်ဆိုတာ လူမျိုးရှိမှတိုင်းပြည်ဖြစ်တာပါ တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်တာကလူမျိုးပါ၊
Foreign Resident says: ကို joe wynn ရေ ။
zaw min says: ဩော်….ဒွတ်ခ…ဒွတ်ခ….ဒီကောင်မလေးလဲ…ဒီဆုလေးရပြီးကတည်းက ပွတ်လော်ရိုက်ခံနေရတာ…